महीनावारी हुँदा योनीबाट आउने रगत अनुहारमा लगाउने युवती !
२७ वर्षकी लौरा टेक्सीरिय हरेक महीना महीनावारीको क्रममा श्राव हुने रगत जम्मा गरेर उनी आफ्नो अनुहारभरि पोत्छिन् । त्यसपछि बाँकी भएको रगतलाई पानीमा मिसाएर आफूले रोपेका बोट बिरुवामा हाल्छिन् ।
कोरली बाछीबाट दैनिक ५ लिटर दूध
सरोज यादव, उर्लाबारी । मोरङका एक किसानले पालेको कोरली बाछीले दुध दिन थालेको छ । नब्याई दूध दिन थालेको सो बाछीले बिहान बेलुकी गरेर ५ लिटर दुध दिंदै आएको छ
एजेन्सी। हाम्रो देश प्राचिन कालदेखि नै अन्धविश्वास र आडम्बरीले जबडिएको छ । २१ औँ शताब्दीमा पनि मानिसहरु सामाजिक अन्धविश्वासमा नै अल्झिरहेका छन् । आफ्नो भविष्य कस्तो होला, के होला भनेर
हिन्दु धर्मशास्त्रले भगवान श्रीकृष्ण इशा पूर्व ३१३८ मा यस पृथ्वीमा अवतरित भएको प्रमाणित गर्दछ।त्यही समयमा नै आर्यावर्तमा मगध हालको (पटना)एक शक्तिशाली राज्य थियो ।त्यसै समय त्यहाँ जरासन्ध राज्य गर्दथे।उनैको वंशमा
हाम्रो शरीरका हामीले नै थाहा नपाएका रोचक कुराहरू !
हरेक मानिसमा दुई हात, दुई गोडा, दुई आँखा, दुई कान र एउटा नाक हुन्छ। एउटै महादेशमा बस्नेहरुको प्रायः रङ उस्तै हुन्छ, खासै धेरै फरक हुँदैन । जस्तो युरोपका मानिस सेता
काठमाडौ, भियग्रा यौन वर्धक औषधीको रुपमा विश्व प्रसिद्ध छ। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने यार्सागुम्बा भियग्रा भन्दा निकै प्रभावकारी भएको कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । चिप्लेकिरा यार्सागुम्बा भन्दा पाउन सजिलो हुनुका
विनोद नेपाल संविधान जारी भई तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् मुलुक संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर भएको तथा क्रमशः संक्रमणबाट मुक्त हुँदै जाने ठानिए पनि मुलुक अझै त्यस दिशातर्फ उन्मुख हुन
राती निन्द्रा पुग्दैन ? मानसिक समस्याले सताउला !
मानिसलाई स्वस्थ रहँदा खानपानसँगै आरामको पनि जरुरत पर्दछ । भविष्यको चिन्ताका कारण धेरैले कम सुत्ने र धेरै काम गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर, त्यस्तो काम स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने
के तपाई नियमित रातो मासु खानुहुन्छ ? त्यसो भए तपाईको आयु घट्ने
खाद्य विशेषज्ञहरुले मासुका पारखीलाई सचेत गराउँदै रातो मासु नियमित खानाले उमेर अर्थात् जिउने आयु घट्ने चेतावनी दिएका छन् । मानिसहरु विभिन्न अवसरमा मासुको प्रयोग धेरै नै गर्छन् । चाहे विवाह
केन्या । केन्यामा आफ्नो निर्वाचनक्षेत्रमा बजेट नदिएको भन्दै रशिद कास्सिम नाम गरेका एक सांसदले फातुमा गेडी नाम गरेकी सांसदलाई आक्रमण गरेको बताइएको छ । गेडी संसद्को बजेट समितिमा सदस्य पनि
अचेलको व्यस्त जीवनशैलीका कारण मानिसहरूले राम्ररी निद्रा पु–याउन पनि पाउँदैनन् । केही मानिस त साना झप्कीमै निद्रा पूरा गर्छन् । केही अन्य चाहिँ हप्तामा एक दिन छुट्टी हुँदा दिनभरि सुत्छन्
(एजेन्सी) हासो हरेक रोगको औषधीको रुपमा चिन्निन्छ । हासोले ब्यक्तित्वमा निखार पनि ल्याउने गर्छ । कतिपय मनिसले हसोले नै कस्को स्वभाव कस्तो छ भनेर थाहा पाउने गर्छन् । तर कती
सेक्स गर्ने निश्चित समय छैन । यति नै बेला सेक्स गर्नुपर्छ भन्ने किटानी त छैन । तर पनि उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेक्स
‘पावर सेक्स’ले एक युवतीको ज्यान लियो
यौन प्राकृतिक कुरा हो भन्ने जान्दा जान्दै यसको प्राकृतिक नियम विपरीत जाँदा मानिसको जीवन आनन्दमय हुनुको साटो कष्टसाध्य हुने मात्र हैन मृत्युका मुखमा समेत पुग्दछ । भारतमा यस्तै एउटा घटना
(एजेन्सी) अमलामा भिटामिन सी प्रसस्त पाइन्छ । अमला त्रिफलाको ३ औषधिमध्ये एक गुणी जडिबुटीमा पर्छ । भिटा मिनको राम्रो स्रोत भएकै कारण अमलालाई हिन्दु धर्ममा पनि पुजनीय फलको रुपमा राखिन्छ
एजेन्सी, इङ्ल्याण्डको राजधानी सहर लण्डनमा महिलाहरुको लागि यस्तो एउटा गोप्य ‘सेक्स क्लब’ छ जहाँ पुरुषहरुलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । लण्डनको यस्तो गोप्य क्लबको बारेमा विभिन्न चर्चाहरु चल्ने गरेका छन्
तपाईं हामीले कैयौँ रेष्टुरेन्ट तथा क्याफेमा गएर कफी पिएका छौँ होला । र, कफीका विभिन्न प्रकार पनि चाखेका छौँ । तर के तपाईंले दुनियाँकै सबैभन्दा महँगो कफीको स्वाद लिने मौका
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नं ५ पुलाचौरको पुरण्यमा २५० वर्ष पुरानो ऐतिहासिक दमाहा भेटिएको छ । पुरण्यका इन्द्रबहादुर दर्जी ९साइलो० को घरमा उक्त दमाहा भेटिएको हो । पुला